News under टिप्स
यी ४ पेय पदार्थबाट टाढै बस्नुस्,जसले घटाउन सक्छन् इम्युनिटी पावर
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd April 2021
काठमाडौं । गत वर्ष अक्टोबर&ndash;नोभेम्बरमा जब कोरोना संक्रमण हुने क्रम घट्न थाल्यो, तब धेरैजसो मानिसले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति (इम्युनिटी) मा ध्यान दिन लगभग छाडे। त्यसभन्दा अघि भने मानिसले आफ्नो इम्युनिटी बढाउने विषयमा निकै ध्यान दिइरहेका थिए। अहिले फेरि कोरोना संक्रमण व्यापक हुन थालेपछि मानिसले आफ्नो इम्युनिटीमा ध्यान दिन थालेका छन्...
किन पुरुषले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 01st April 2021
आजभोलि विवाहित महिलामाथि अन्य पुरुषहरूले आँखा लगाउनु साधारण नै भइसकेको छ । हामीले यस्तो घटना देख्दै&ndash;सुन्दै पनि आइरहेका छौँ आखिर किन पुरुषहरूले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई जान्नुहोस् कारण । यदि कुनै विवाहित महिला आफ्नो सबै काम सही ढंगमा गर्छिन् र सधैँ अनुहारमा मिठो मुस्कानका साथ बोल्छिन् भने यस्ता बानीले पुरुषलाई...
' बल्ड प्रेसर लाे ' भएका मानिसले सेवन गर्नै पर्ने खानेकुराहरू
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th March 2021
बल्ड प्रेसर लाे भएका मानिसले सामान्यतय खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा अत्याधिक शारिरिक थकान, स्मरण तथा एकाग्र शक्तिमा ह्रास , वाकवाकी लाग्ने , शारिरिक कमजाेरी अादी जस्ताे समस्या हुने गर्छ । प्रेसर लाे भएकाले खानैपर्ने केही खानेकुराहरू १. पात भएको सागसब्जी :&nbsp;पात भएको सागसब्जीमा आइरन हुन्छ । जुन मानव शरीरको...
सावधान ! यि खानेकुराले झर्छ कपाल
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th March 2021
काठमाडाैँ । कपाल झर्नु आजकाल जटिल समस्याका रूपमा खडा भएकाे छ । यसका पछाडि धेरै कारण हुनसक्छ जसमा रोग र बंशानुगतका साथै खानपिन पनि समावेश छन् । कस्ताे खानाले झर्छ त कपाल ? १. तारेका खानेकुराःयसमा अत्यधिक तेल हुन्छ जसले टाउकोको कपालको प्वाल बन्द हुन्छ जसका कारण कपाल तीब्र रुपमा झर्ने...
यस्ता छन् हरियो खुर्सानी सेवानका फाइदाहरू , साैन्दर्य वृद्धिका लागि पनि अचुक
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd March 2021
आहार जीवनकाे अभिन्न अङ्ग हाे , पिराे अर्थात खुर्सानी । मुलतः स्वादका लागि खाइने खुर्सानीका अन्य धेरै फाइदा पनि रहेका छन् । जसमा हरियो खुर्सानीकाे फाइदा तल चर्चा गरिएकाे छ । १. हरियो खुर्सानीमा भिटामिन ए, बी ,सी,आइरन,पोटासियम,कार्बोहाइड्रेट र अन्य धेरै पोषक पदार्थ पाइन्छन् । यसकाे नियमित सेवनले महिलाहरूमा हुने...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th February 2021
हास्नुकाे फाइदा त हामीले सुन्दै नै अाइरहेका छाैँ । तर के तपाइले रूनुका फाइदा बारे कहिले सुन्नु वा विचार गर्नु भएकाे छ ? सुन्दा अच्चम लाग्छ तर कमाेजाेरीकाे प्रतिक मानिने रूवाइका पनि धेरै फइदाहरू रहेका छन् । जसकाे चर्चा तल प्रस्तुत गरिएकाे छ । १. रूवाइले शरिरमा एक विशेक केमिक उत्पादन...
कालाे अंकुरले राख्छ टाढा यी राेगलाई, थाहापाउनुहाेस् फाइदाहरू
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th February 2021
काठमाडौँ । प्राय सबै फलफुल स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । मौसम अनुसार फरकफरक फलफुलको सेवनले शरिर र माष्तिस्क दुवै स्वस्थ हुन्छ । यही मध्ये एउटा हो ,अंगुर । अंगुरलाई निकै गुणकारी फल मानिन्छ । कालाे र हरियाे गरी अंकुर दुइ प्रकारका हुन्छन् । गुणका अाधारमा कालाेलाइ सर्वाेत्म मानिन्छ । अंगुरमा सबै...
बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ भने अप्नाउनुहाेस् यस्ताे विधि
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th February 2021
काठमाडौँ । बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुने समस्या धेरै मानिसहरुको हुने गर्छ । यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ&ndash;आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही&nbsp; जडिबुटी जसले बान्ता हुनबाट बचाउँछ । १ . जेठीमधु : यो मधुर...
सधैँ थकित र अल्छी महसुस किन हुन्छ ?, यस्ता छन् कारणहरू
काठमाडौँ । के तपाई बढी नै थकित र अल्छी महसुस गर्नु हुन्छ ? प्रशस्त निन्द्राको बाबजुत पनि निन्द्रा लाग्ने, थकित महसुस गर्ने भइरहेको छ भने थाहा पाउनुस् यी हुन सक्छन् यसका कारणहरु १. प्रशस्त पानी नपिउनु: अध्ययनका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा यसले तापाइँलाई थकित महसुस गराउँछ । त्यसैले प्रशस्तमात्रामा...
फिट रहने मन छ ?यस्ता विधि अवलम्बन गर्नुहोस्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th February 2021
स्वस्थ, तन्दुरुस्त कसरी रहने ? यसको कुनै त्यस्तो सूत्र छैन, जो तपाईं&divide;हाम्रो जीवनमा पूर्णत लागु गर्न सकियोस् । यद्यपि सामान्य दिनचर्यालाई बदलेर वा खानपान र आनीबानी परिवर्तन गरेर हामीले निरोगी जीवन बाँच्न सक्छौं । अर्थात अनुशासित जीवनशैली अपनाएर जवान, तन्दुरुस्त र स्वस्थ रहन सकिन्छ । यसका लागि अनियन्त्रित खानपान त्याग्नेदेखि...
कागतीको रस, कपालका अनेक समस्याकाे साझा समाधान
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 04th February 2021
कपाल सौन्दर्यको महत्तवपूर्ण मानक हो । बाक्लो र लामो कपाल नचाहाने महिला सायदै होलान् । सहि हेरविचार हुन नसकेको खण्डमा यसले महिलाको सौन्दर्यमै ह्रास ल्याउछ । कपालको हेरविचार गर्ने उपुक्त र सहज विधि के त? चिसाे माैसममा कपालको सही रेखदेख गर्नु जटिल कार्य हो । त्यसको लागि कागतीको रस प्रभावकारी हुन सक्छ...
बर्डफ्लु देखिएको बेला कुखुराको मासु खाने कि नखाने ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd February 2021
काठमाडौँ - काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लु देखिएपछि अहिले धेरै मानिसमा कुखुराको मासु खाने की नखाने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । माघ १७ गते पशु सेवा विभागले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका ७ साङ्लेखोला, फुटुङमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि गरेको थियो। चिकित्सकहरुका अनुसार बर्डफ्लु लागेको अवस्थामा मासु खान डराउनु पर्दैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कुखुरालगायत अन्य...
मरेको बाउको विर्यबाट जन्मिएको सिम्बा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th January 2021
काठमाडौ । सिंगापुरको चिडियाखानामा मरेको बाउको विर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाबाट सिंह डमरू सिम्बा जन्मिएको खुशियालीको लहर चलिरहेको छ । कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाबाट सिम्बा जन्माउन सकेपनि बाउ मुफासालाई जोगाउन भनि सकिएन ।&nbsp;मुफासाका एक्लो छोरो सिम्बा हो । सिम्बा प्राकृतिक मैथुन प्रक्रियाबाट जन्मेको होइन । मुफासाको वंशवृद्धिका लागि सो चिडियाखानाले यो कृत्रिम गर्भाधान विधि...
युरिक एसिड के हो ? कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th January 2021
शरीरमा प्रोटिनको मेटाबोलिज्म भएर निस्कने तत्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ । न्युक्लिक एसिड र प्युरिन ग्रुपको प्रोटिनबाट मात्र युरिक एसिड बन्छ । यो सामन्यतय पिसाबबाट बाहिर निस्कन्छ । जब मृगौलाको छान्ने क्षमता कम हुन्छ र युरिक एसिड रहन्छ, तब त्यो हड्डीको जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ । मृगौलाले युरिक एसिड कम उत्सर्जन गर्दा...
यस्ता छन् गर्भावस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
शारीरिक र भावनात्मक रुपले आफ्नो राम्रो ख्याल राख्ने आदर्श समय हो, गर्भावस्था । यतिबेला स&ndash;साना कुरामा सर्तक रहनुपर्छ, खानपानदेखि जीवनशैलीसम्म । सकारात्मक सोंच राख्नुपर्छ । यसले गर्भको बच्चामा राम्रो प्रभाव पार्छ । नतिजा, बच्चा र आमा दुबैको स्वास्थ्यमा खोट आउने भय हुँदैन । प्रसवपूर्वको हेरचाह जब आफुलाई गर्भवती भएको थाहा हुन्छ, चिकित्सकलाई...
यस्ता खानेकुराले बढाउँछ स्मरणशक्ति
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th January 2021
काठमाडौ &ndash;स्मरणशक्ति विकासका लागि हाम्रो जीवनशैली, खानपानको खास भूमिका हुन्छ । जब शारीरिक स्वस्थ्य ठीक हुन्छ, शरीर चुस्त र तन्दुरुस्त हुन्छ । स्मरण शक्ति तेज हुन्छ । खराब जीवनशैलीलाई त्याग्नैपर्छ, स्मरण शक्ति ह्रास हुनबाट बचाउनका लागि । योग, ध्यान, प्राणायम यस्तो विधी हो, जसले मस्तिष्कको कार्य संचालनलाई सही राख्छ । त्यसैले...
सर्वाधिक लाभ लिन दुध पिउने समय बिहान की बेलुका ? यसो भन्छ आयुर्वेद
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th January 2021
काठमाडैँ । पौष्टिक तत्तवको अग्रपङ्तिमा आउने मध्ये दुध प्रमुख हो । प्रोटिन, भिटामिन ए, बी १, बी १२, भिटामिन डी, पोटासियम र म्याग्नेशियमको स्रोत रहेको दुध शरिरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यका लागि फाईदजनक मानिन्छ । धेरैले यसको सेवन गर्ने भएता पनि सहि ढङ्गले र अत्याधिक लाभ लिने तवरले भने कमैले पिउदछन्...
मृगौलाको पत्थरी हुँदा के–के खान नहुने ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th January 2021
काठमाडौं &ndash; खनिजतत्व र नुन आदिबाट मृगौलामा बनेको कठोर डल्लोलाई मृगौलाको पत्थरी भनिन्छ । हुन त मृगौलाको पत्थरी हुनमा धेरै कारक तत्वहरू जिम्मेवार छन् । हामीले खाने खानेकुराहरूको भूमिका ती सबै कारक तत्वहरूमध्ये मुख्य मानिएको छ । मृगौलाको पत्थरी हुँदा के खाने वा नखाने भनेर निक्र्यौल गर्नुभन्दापूर्व हाम्रो शरीरमा...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th December 2020
आज २०७७ पौष १५ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही ...
जाडोमा औंलाहरु सुन्निछन् ? यस्ता छन् बच्ने उपाय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th December 2020
काठमाडौं &ndash; जाडो याममा हातखुट्टाका औंला रातो हुने, सुन्निने, चिलाउने, पोल्ने वा घाउ भएर फुट्ने जस्ता समस्याले कतिपय मानिसलाई सताउने गर्छ । कसैकसैलाई त जाडो मौसममा हातखुट्टाका औंलाहरुमा मात्रै होइन, कानको लोती र नाकको टुप्पोमा समेत यो समस्या देखापर्छ । उनीहरुको नाकको टुप्पो वा कानको लोती चिलाउने, रातो हुने, सुन्निने र...
गोलभेँडाका फाइदा : बाँझोपनका कारण सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीका लागि त वरदान
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th December 2020
काठमाडौं &ndash; गोलभेँडामा पाइने लाइकपीन नामक पोषक तत्त्वले पुरुषमा शुक्र कीटको गुण बढाउने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो (प्युरी) सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्र कीट बनेको पाइएको छ। सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँझो पन भएको पाइन्छ। विज्ञहरूले पुरुषमा हुने...
यस्तो गोप्य अंग हुने महिलाले धेरै यौन सन्तुष्टी दिन्छन्!
एजेन्सी &ndash; व्यक्तिअनुसार पुरुष गोप्य अंग वा महिला गोप्य अंगको नाप र आकारमा धेरै भिन्नता हुन्छ । कामसूत्रका लेखक ऋषि वात्सायनले पनि नापलाई आधार बनाएर पुरुष गोप्य अंग तथा महिला गोप्य अंग वर्गीकरण गरेका छन् । उनले पुरुष गोप्य अंगको नापअनुसार खरायो, वृष (साँढे) तथा अश्व (घोडा) र महिला गोप्य...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th December 2020
अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिन विश्वभरि सबैतिर मानिसहरूले मास्क लगाउने गरेका छन्। तर चस्मा लगाउने मानिसलाई मास्कका कारण केही समस्या हुने गरेको छ। के चस्मा र मास्क एकैचोटि सजिलैसँग लगाउन मिल्दैन र? मास्क लगाएको बेला सास फेर्दा चस्मामा बाफ जम्न नदिन यस्ता उपाय गर्न सकिन्छ है! हेर्नुहोस् यो भिडिओ। ...
यौन क्षमता बढाउन यी बानीहरुमा ख्याल पुराउनुहोस
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd December 2020
एजेन्सी । तनावपूर्ण र असन्तुलित जीवनशैलीले मानिसको मस्तिष्कमा नकरात्मक प्रभाव पार्नुका साथै शारीरिक स्वास्थ्य पनि बिगारिरहेको हुन्छ । पुरुषहरु केही कुरामा अभ्यस्त हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरुको शुक्रकिट उत्पादनमा नकरात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । यदि तपाई सुतेर टिभी हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बानीलाई आजैबाट त्याग्नुहोस् । यस्तो बानीले शरीरको मोटोपनलाई बढाउँछ र शुक्रकिटको...
ग्यास्ट्रिकको समस्याले हैरानु हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधान उपाय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th November 2020
काठमाडौं &ndash; नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा अधिकाशं मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या पाइन्छ । प्रायः नेपालीमा पाइने यो रोगलाई आम नेपालीको रोग समेत भनिन्छ । खानाको समय नमिल्दा मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने गर्दछ । हामीले सही समय र मात्रामा खाना खाने गर्नु पर्दछ । अन्यथा ग्यास्ट्रिक हुने गर्दछ । ग्यास्ट्रिकलाई सामान्य ठानेर छाड्नु हुदैन...
खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदै-फाइदा
काठमाडौं &ndash; सामान्यतया हामीले खानाका विभिन्न परिकार तेलमा भुट्ने क्रममा अथवा ग्रेभी बनाउन लसुनको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छौँ । लसुनले कुनै पनि खानाका परिकारहरुलाई स्वादिष्ट बनाउन सहयोग गर्छ । तर लसुनमा यति धेरै गुणकारी तत्व रहेका हुन्छन् जसले हामीलाई विभिन्न रोगहरुबाट मुक्त गराउँछ । आयुर्वेदमा त लसुनलाई औषधी नै मानिएको छ ।...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th November 2020
काठमाडौं &ndash; जाडोमा विभिन्न प्रकारका छालाका समस्या देखापर्न सक्छन्। चिलिब्लेन्स जाडोमा बढी देखिने समस्या हो। यो विशेषगरी चिसो हावा र पानीको कारणले हुने गर्छ। मुख्यतः जाडोमा छाला सुख्खा हुने समस्या नै बढी हुन्छ, जसलाई जेरोसिस भनिन्छ। सुख्खापन विशेगरी बच्चा र बुढालाई भयो भने बढी आपत पर्छ। सुख्खा भयो भने चिलाउँछ।...
कब्जियतको समस्या छ ? जान्नुहोस् यी घरेलु उपाय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th November 2020
कब्जियतका समस्या कुनै पनि उमेरका मानिसलाई हुनसक्छ । उपचारबाट कब्जियत निको गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि घरेलु उपचार पनि गर्न सकिन्छ । &ndash; कब्जियतको समस्या भएमा एक गिलास पानीमा नुन हालेर पिउनुस् । यसले पाचन तन्त्र सफा गर्ने मात्र होइन कब्जियतका लक्षणबाट पनि राहत दिलाउँछ ।...
विवाहपछि धेरैजसो महिलामा आउने यी ५ पछुतो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th November 2020
काठमाडौँ । विवाह हाम्रो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फैसला हो, जुन सोच विचार गरेर मात्र लिनु पर्दछ।&nbsp; यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्। कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ विवाहपछि प्राय महिलालाई कुरा कुरामा पछुतो हुने गर्दछ। सेल्फ टाइम...
अमेरिका पुगेका हिरोइनहरु कल-गर्लको पेसामा
एजेन्सी । अमेरिकाका लोकल अथोरोति ( पुलिस ) को अनुसार त्यहाँ साउथ एशियाका कलाकारहरु कल गर्लको रुपमा काम गरिरहेको जानकारी भएको कुरा बाहिरिएको छ । जसमा भारत, तेलुगुका सिनेमासँग सम्बन्धित युवती र नायिकाहरू संलग्न रहेका पहिएको छ । चिकागो सहर यसको केन्द्र बन्दै गहिरहेको पनि एक प्रेस मीटमा जाकारी दिइएको...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th November 2020
सिमकाेट। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सामा चिसोले पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ। कात्तिक महिनाको दोस्रो सातादेखि हुम्लामा चिसो बढ्न थालेपछि हिल्सामा जम्मा गरेर राखेको पानी बरफ हुन थालेको हो। रातिको समयमा अत्यधिक चिसो हुने भएकाले धारामा बिहानको समयमा बरफ जम्न थालेको छ। बाल्टिनलगायत अन्य सामग्रीमा जम्मा गरेर राखेको पानीसमेत जमेर...
काँचै प्याज खानुका यस्ता छन् फाइदा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th September 2020
काठमाडौं &ndash; भान्सामा दैनिक रुपमा प्याज प्रयोग हुन्छ। कतिपयले तरकारी&ndash;अचारमा प्याज हाल्छन् त कतिले सलादको रुपमा काँचै खान मन पराउँछन्। खासमा प्याज काँचै खानु बढी फाइदाजनक हुन्छ। काँचो प्याजले कैयौं मौसमी बिरामीबाट बचाउन सहयोग पुग्छ। साथै तपाईंको सुन्दरतामा पनि काँचो प्याजले निखारता ल्याउँछ। यस्ता छन् काँचो प्याजका खास ५ फाइदा १. प्याजमा पाइने...
यी हुन् महिलामा हुनुपर्ने ३२ गुण
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th September 2020
काठमाडौं &ndash; हिन्दू धर्म अनुसार कुनै युवतीलाई ३२ गुणले युक्त भएको मानिनु भनेको ऊ पूर्ण रुपमा उत्कृष्ट हुनु भन्ने बुझिन्छ । सामाजिक रुपमा पनि ३२ गुणले युक्त भएको या नभएको भन्दै युवतीको तुलना गर्ने चलन छ । विवाहका बेला वर र वधुको चिना मिलाउँदा पनि युवतीको गुणलाई महत्त्व दिइएको पाइन्छ ।...
कोरोनाको औंषधी ‘गुर्जो,के हो गुर्जो ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th August 2020
काठमाडौं - कोभिड&ndash;१९ संक्रमण देखिनुभन्दा पहिले फाट्टफुट्ट रुपमा प्रयोग हुने गुर्जो अहिले धेरैले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसको प्रयोग बढ्न थालेपछि ठाँउठाँउमा अभाव हुन थालेको छ । नर्सरीमा फालाफाल पाइने गुर्जो यतिखेर अभाव हुन थालेपछि कतिपयले मूल्य तिरेर ल्याउन थालेका छन् । उद्योगी, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी र योगसाधकले मात्र नभई यतिखेर...
यस्ता छन् बिहानको नास्तामा दही र चिनी खानुका फाइदा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th August 2020
एजेन्सी &ndash; नेपाली परम्परामा दही र चिनी शुभसाइतका लागि खाने प्रचलन रहेको छ । तर, वैज्ञानिक रुपमा खाली पेटमा दही र चिनी खाँदा स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ । दहीलाई चिनीमा मिसाएर खाँदा यसले क्याटालिस्टको काम गर्छ जुन शारीरिक र मानसिक रुपमा फाइदाजनक हुन्छ । &lsquo;सुपर फुड&rsquo;दहीलाई सुपर फुड मानिन्छ ।...
सेक्सी महिला कसरी छुट्याउने ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th August 2020
एजेन्सी &ndash; महिलाको व्यक्तित्व जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ। आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जुन शरीरको अंग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको परिचय दिने गर्दछ। यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट कसरी महिलाको व्यक्तित्व जान्न सकिन्छ भन्ने विषय पस्केका छौ । आँखानिकै चञ्चल, चमक तथा गहिरो पातलो र वरपर...
यस्ता छन् हरेक बिहान कागती पानी पिउनुका फाइदा
काठमाडौं - कागती भिटामिन सी, पोटासियम तथा फाइबर लगायतका पौष्टिक तत्वहरुको भण्डार हो । यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी छ । कागतीलाई विभिन्न स्वरुप र प्रकारमा खाइन्छ । चाहे पानीमा हालेर होस् वा चियामा, अनि तरकारी वा खानामा र अचार बनाएर । कागती पानी पिउनुको मुख्य फाइदा के हो भने...
दूध र तुलसीका पात उमालेर पिउँदा यस्ता फाइदा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 06th August 2020
काठमाडौ - तुलसीका पात औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । मान्छेले तुलसीका पात चियामा हालेर पनि खाने गर्छन् । यसका फाइदा धेरै छन् । चिसो लागेका बेला यसको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । अझ दूध र तुलसीका पात मिसाएर उमालेर खाँदा यसले फाइदा पुर्&zwj;याउँछ । यति मात्र होइन, तुलसी र दूध...
पुरुषहरुले सम्भोगका बेला सत्रुको रुपमा लिने यी १० चिज
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 03rd August 2020
एजेन्सी - सम्भोगबाट बढि भन्दा बढि आनन्द प्राप्त गर्नका लागि महिला र पुरुष दुबैले सम्भोगलाई जित र हारको विषय बनाउन नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । पुरुष वा महिलालाई यदि सहवासको मामिलामा आफ्नो कमजोरी महसुस हुनपुग्यो वा अरु कुनै विषयले आफ्नो मर्यादा वा सक्षमतालाई माथ दियो भने सहवास सन्तोषजनक बन्न सक्दैन । पुरुषहरु...
गोरो बन्न यी उपायहरु अप्नाउनुहोस्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd August 2020
छालाले शरीरको पूरै भाग ढाकेर राखेको हुन्छ । गर्मीयाममा सूर्यको किरण निकै तेजिलो हुने भएकाले शरीरको खुला भागमा सन बर्न हुने, दाग बस्नेलगायतका समस्या आउन सक्छन् । त्यसैगरी अहिले सहरको धुलो र धुवाँले गर्दा छालामा धेरै असर पर्नसक्छ । धुलोले गर्दा छाला चिलाउने र गहिरो घाउ बनेर दागसमेत बस्ने सम्भावना...
उपरखुट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ ? सावधान !
के हाम्रो बसाईको स्थितीले पनि स्वास्थ्यमा असर गर्छ रु पक्कै गर्छ । स्वस्थ जीवनका लागि बसाईको आसन पनि सही हुनुपर्छ । जस्तो हामीमध्ये धेरैजसो एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्ने गर्छौं, जसलाई चलनचल्तीको भाषामा उपरखुट्टी लगाएको भनिन्छ । यसरी बस्नुलाई हाम्रो समाजमा त्यती शोभनिय मानिदैन । खासमा खुट्टा क्रस गरेर वा...
मोटोपन कम गर्न यी ५ ट्रिक्स अपनाउनुस्
काठमाडौं । जिम जाने चाहना सबैलाई नहुन सक्छ तर तौल घटाउने चाहना भने सबैलाई हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त पानीजसरी पैसा बगाउँदा पनि तौल घट्दैन । तौल घटाउनको लागि आफ्नो शरीरले कति क्यालोरी पाइरहेको छ र कति खपत भइरहेको छ भन्नेकुरा जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ । अब कुरा आउँछ मोटोपन कम...
शरीरको तौल बढेको छ ? यस्ता छन् घटाउने तरिका
हामी सबैलाई थाहा छ कि जाडो मौसममा वजन घटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । किनभने गर्मीमा मेटाबलिजम धेरै राम्रो हुन्छ, र वजन कम गर्न सजिलो हुन्छ । यो मनसुनको मौसममा समेत रहन्छ । गर्मी र वर्षाको मौसममा सूर्यको किरण पनि राम्रो हुन्छ, त्यसैले शरीरमा भिटामिन डी पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । आज...
दाँत सफा कसरी गर्ने ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 31st July 2020
काठमाडौं - हामी सबै सोच्ने गर्छौ कि जति धेरै टुथपेस्ट (मन्जन)को प्रयोग गर्छौ, त्यति नै धेरै दाँत सफा हुन्छ। तर, यो सबै हाम्रो भ्रम मात्रै हो। किनकि जुन कुरा पनि चाहेको भन्दा बढी प्रयोगले नकरात्मक असर गर्छ। भनिन्छ नि &lsquo;चिनी पनि धेरै खाए तितो हुन्छ र औषधि पनि धेरै पिए...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th July 2020
अचेल मानिसहरु सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरुमा यो लत बसेको हो । त्यतिमात्र नभएर उनीहरु मोबाइल तथा ल्यापटमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरुबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् । यसबाट उनीहरुले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्नसक्ने जोखिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक(पटक एउटै कुरा...
गर्मीमा मही पिउनुहोस्, यस्ता छन् फाइदा
शहरी क्षेत्रमा महीको महत्व थाहा हुँदैन । दही&ndash;महीभन्दा पनि बजारमा पाइने चिसो पेय पदार्थमा मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो पाइन्छ । बजारमा पाइने चीसो पेय पदार्थले मानव स्वास्थ्यलाई पाइदा पुर्याउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु खान छाड्दैनन्। गर्मी मौसममा आमाबाबुले बालबालिकालाई चिसो पेय पदार्थ दिने गर्छन् । यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्छ ।...
६ कारण, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ
रोग लाग्नु वा रोगी जीवन बाँच्नु आफैमा पीडादायक अवस्था हो । परिवारमा एक जना व्यक्ति मात्र रोगी हुँदा सम्पूर्ण सदस्यको दैनिकी प्रभावित हुन्छ । मानसिक तनाव बढ्छ । हामी चाहन्छौं, स्वस्थ जीवन बाँचौं । सधै निरोगी भएर बाँचौं । सधै तन्दुरुस्त भएर बाँचौं । दीर्घ जीवन बाँचौं । तर, हाम्रो...
यस्ता छन् रक्तअल्पताका लक्षण र उपचार विधि
काठमाडौं&nbsp; - शरीरमा कहिले काहिँ थकाई लाग्नु वा कडा मेहनतपछि शरीर गल्नु स्वभाविक हो । तर बिना परिश्रम पनि शरीर गल्छ वा थकाई लाग्छ भने यो रक्तअल्पताको लक्षण हो । रक्तअल्पताको समस्या भएमा थकाई लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ । तर धेरै मानिस हत्तपत्त रक्तअल्पता भएको थाहा पाउदैन । यसका...
महिलामा उमेर ढल्किदै गएपछि किन यौन इच्छामा कमि हुन्छ ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th July 2020
जति जति उमेर ढल्कदै जान्छ, महिलामा यौन इच्छाको कमी हुँदै जान्छ । उनीहरु यौनमा उदासिन हुन थाल्छन् । हुन त शरीर बुढो भएपनि मन बुढो हुँदैन भनिन्छ । यौन इच्छा एक मानसिक अवस्थामा पनि निर्भर गर्ने कुरा हो । भलै यसमा शरीरले प्रभाव पारेपनि यौन इच्छा मनसँग बढी निकट छ ।...
लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्दा गर्धन, काँध र कम्मरमा समस्या आयो ? यस्ता छन् समस्या हटाउने उपाय
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th July 2020
काठमाडौं - विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले धेरै व्यक्तिहरु घरबाट नै कार्यालयका कामहरु गरिरहेका छन् । यस सिलसिलामा गलत तरिकाले बसेर काम गर्दा गर्धन, काँध र कम्मरको दुखाईबाट पीडित हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार दिनमा ८ देखि १० घण्टा कुर्सीमा बस्नु वा...
सुत्ने बेलामा ध्यानदिनुहोस् यी कुरा
निन्द्रा हाम्रो दिनचर्याको एक अभिन्न भाग हो । जब हामी सुतेर उठ्छौ तब हामी फ्रेस महसुस गर्छौ । सुतेको बेलामा हाम्रो शरीर भित्र पुनः ऊर्जा जम्मा हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जा स्वतः रूपमा आउँछ, जसले हामीलाई ठूलो मात्रामा काम गर्ने शक्ति दिन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार सुत्ने बेलामा दक्षिण दिशापट्टि खुट्टा राखेर सुत्न हुँदैन...
सेतो पानी बग्ने समस्याको उपचार घरमै यसरी गर्न सकिन्छ (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छन्। विशेषगरी पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। पछिल्लो समय धेरै नेपाली महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिने गरेको छ। यो समस्याका धेरै कारण छन्। महिलाहरुको योनीबाट सेतो, पहेंलो, हरियो, रगत मिसिएको आदि इत्यादि...
डण्डीफोर आएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् हटाउने केही सजिला उपायहरू
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th July 2020
युवा अवस्थामा अनुहारमा देखिने डण्डीफोरदेखि तपाई पनि खुब हैरान हुनुन्छ होला । प्रशस्त सुत्दा पनि डण्डीफोर कम हुने त मानिन्छ तर केही सजिला उपायहरूबाट डण्डीफोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विकिहाउले लेखे अनुसार दिनमा कम्तिमा तीन पटक राम्रोसँग मुख धुनुपनि डण्डीफोर घटाउने गतिलो उपाय हो । यस्ता छन् थप उपायहरू&ndash; विहान,...
सावधान ! भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ७ चरित्रका पुरुषसँग प्रेम
भनिन्छ प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेम जतिबेला जोसुकैसँग पनि हुनसक्छ । अधिकांश प्रेम हतारमा बस्छ र पछि गएर पछुताउने गर्छन् । प्रेमले संसार जिताउँछ भने जिन्दगि नै बर्वाद पारिदिन्छ । प्रेम यस्तो आकर्षण हो, जहाँ एक भेट र एकैछिनको कुराकानीले पनि ठुलो महत्व राख्छ । भने कतिपय अवस्थामा वर्षौको परिचय...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th July 2020
लकडाउन नहुँदो हो त यतिबेला महिलाहरू ब्युटीपार्लर धाइरहेका हुन्थे । सौन्दर्य प्रशाधन खरिद गरिरहेका हुन्थे । तर अहिले त्यस्तो अनुकूलता छैन । कहिलेकाहीँ असहज कुराले पनि नयाँ कुराहरूको खोजी र अभ्यास गर्न प्रेरित गर्छ । लकडाउनले गर्दा ब्युटीपार्लर धाउन नपाएपछि वा सौन्दर्य प्रशाधन उपलब्ध नभएपछि यतिबेला महिलाहरूले त्यसको विकल्प खोजिरहेका...
एजेन्सी । साङ्लोले नसताएको घर कमै भेटिएला। अँध्यारो कुनाकाप्चामा लुकेका साङ्ला फुत्तफुत्त निस्केर हैरानै गर्छन् होला। गर्मी र बर्खाका बेलामा साङ्लाको संख्या ह्वात्तै बढ्छ। अनि कहिलेकाहीँ पकाइराखेको तरकारी वा मुछिराखेको पीठोसहित साङ्ला फाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। बजारमा पाइने स्प्रेले साङ्लालाई मार्छ तर त्यसमा भएको रसायनले स्वास्थ्यलाई हानि पनि पु(याउँछ । यहाँ हामी केही...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd July 2020
केही मान्छेहरू समयमा खान नपाएर अस्वस्थ हुन्छन्, धेरै मान्छे पाएको खानेकुरा विधिपूर्वक खान नजानेर अस्वस्थ हुन्छन् । खानामा एउटा विज्ञान छ, यही विज्ञानको आधारमा प्राचीनकालदेखिको हाम्रो खाना संस्कार चल्दै आएको छ । खानाकै सवालमा एक व्यक्तिगत प्रश्न पनि आउन सक्छ, के तपाई प्रायः पेटको भारीपन, ग्यास र अन्य पाचनसम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित...
ग्यास्ट्रिकले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधानका उपाए
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 18th July 2020
काठमाडौं - आजकल हरेक दोश्रो मानिसमा ग्यास्ट्रिकको समस्या रहेको छ । अधिकाशं नेपालीको साझा रोग झै रहेको ग्यास्स्ट्रिक अर्थात ग्यास्ट्राइटिस आम समस्या बनेको छ । सहि समयमा खाना नखानु, सहि मात्रामा नखानु, चिल्लोपिरो नबार्नु र अव्यवस्थित जीवनशैलीका ग्यास्ट्राइटिसको समस्या देखा पर्दछ । पेटको समस्या भएकाले ग्यास्ट्राइटिसबाटै अनेकौं रोगहरु जन्मने गर्दछ ।...
कम उमेरमै छाला चाउरिनुका कारण यस्ता ,कसरी गर्ने हेरचाह ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 15th July 2020
काठमाडौं &ndash; प्रायः कम महत्वमा पर्ने तर अति नै संवेदनशील अंग हो, छाला । मानव शरीरको सौन्दर्यसँग जोडिएकाले यसको हेरचाहमा वैज्ञानिक तरिका अपनाउनुपर्छ ।९० प्रतिशतभन्दा बढी कोलाजेन प्रोटिनले बन्ने छाला शरीरको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थि हो, जसलाई बनोटका दृष्टिले डर्मिस र एपिडर्मिस गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । &ndash; बुढ्यौलीपनसँगै छालामा पर्ने...
यौनशक्ति बढाउँने इच्छा छ ? त्यसो भए प्याज खानुहोस्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 12th July 2020
एजेन्सी - यदि तपाइको केहि दिन यता यौनेच्छामा कमी भएको छ, भने तपाईले आफ्नो खानामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै आहारले सेक्सको इच्छा र शक्ति बढाउन मद्धत पु&yen;याउँछ । यसमध्ये प्याज एक महत्वपूर्ण तत्व रहेको छ । आउनुहोस प्याजले कसरी यौन इच्छा र शक्ति बढाउँछ चर्चा गरौं । सर्कुलेशनलाई उत्तम राख्छ प्याज सल्फाइडको...
बौद्ध भिक्षुले गर्ने एक ध्यान विधि : कति सरल, कति उपयोगी ?
जीवन अहिले एक दौड बनेको छ । जहाँ हामी सबै जित्नका लागि दौडिरहेका छौं । भागदौडको जिन्दगीलाई केही समयका लगि रोक्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? यसको जवाफ अधिकांशको छैन भन्ने नै हुन्छ । जीवित तथा गुणले सम्पन्न भएको जीवनको बीचमा ठूलो अन्तर हुन्छ । तपाईंसँग विलासी...
यी चार फलफूल खाली पेटमा खानु हुँदैन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th July 2020
फलफूल सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । तर कतिपय फलफूल यस्ता हुन्छन्, जसलाई खाली पेटमा खानु उचित हुँदैन । त्यसैगरी यस्ता थुप्रै खानेकुरा हुन्छन्, जसलाई खाली पेटमा सेवन गर्दा त्यो हानिकारक हुन्छ । १। आँप अहिले आँपको सिजन छ । मौसमी फलफूल स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । आँपलाई फलको राजासमेत भनिन्छ...
यस कारण साउनमा माछामासु छाड्नु उचित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 08th July 2020
साउन लाग्दैछ । धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि यो महिना विशेष मानिन्छ । साउनलाई &lsquo;पवित्र महिना&rsquo;को रुपमा लिने गरिन्छ । त्यही कारण यस अवधिमा शरीरलाई शुद्ध राख्ने, भक्ति आराधना गर्ने, सात्विक भोजन लिने गरिन्छ । अर्थात साउनमा मासुजन्य वा गरिष्ठ एवं तामासी परिकार त्याग्नु उपयुक्त मानिन्छ । कतिपयले प्याज, लसुन जस्ता...
साउन महिनालाई भत्ती&ndash;आराधानाको महिनाको रुपमा लिइन्छ । यतिबेला शरीरलाई शुद्ध राख्ने, शाकाहारी भोजन गर्ने, पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ । अतः पूजाआजाका क्रममा हामीले धूप बाल्ने गर्छौं । विगतमा विभिन्न वनस्पतिको पात एवं बोक्राको मिश्रणबाट तयार गरिएको विशेष किसिमको धुप बालिन्थ्यो, जो लाभदायक मानिन्थ्यो । अहिले भने तयारी सुगन्धित धुप बाल्ने...
दाँतको सुरक्षा गर्न ध्यान दिनुहोस् यी १० कुरा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th July 2020
दाँत पाचन प्रकृयामा मात्र होइन मानिसको ब्यक्तित्वमा समेत महत्वपुर्ण छ । सफा, मिलेको दाँतले मानिसको सुन्दरतामा विकास गर्दछ । अझ शरीरलाई दाँत अनिवार्य छ । खाना चपाउनु दाँतको सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम हो । तर दाँतको राम्रोसँग हेरचाह भएन भने यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ दाँतलाई जोगाउन निम्न काम गर्नु पर्दछ । १....
राँगा र खसीको मासुभन्दा सलह किरा पोषिलो !
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 28th June 2020
काठमाडौं&ndash; नेपालमा शनिवार सलह किरा प्रवेश गरेको छ । त्यो प्रवेश गरेसँगै सरकारले त्यसमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान शुरु गरेको छ । सलह किरालाई व्यवसायिक रुप दिन पनि सरकारले तयारी गरिरहेको छ । सलह किरा मारेर ल्याउनेलाई सरकारले रकम दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए । प्रदेश ५...
विकिनी लगाएर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने नर्स बनिन् मोडल १० तस्विरमा
एजेन्सी - एजेन्सी र रुसमा केही समय अघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने क्रममा पारदर्शी पिपिई लगाएर विकिनी लगाएर खटिए पछि अनुसासनको कार्बाहीमा परेकी नर्स २३ बर्षे नाजेज्दा जुकोभा अन्ततः मोडल बनेकी छन् ।गत मे मा उनको फोटो भाईरल बनेको थियो । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने क्रममा बिकिनीमा देखिए पछि...
यस्ता छन् कागती पानी पिउनुका १५ आश्चर्यजनक फाइदा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 27th June 2020
कगति हिमाल पहाड तराई जहाँ कहिँ पनि पाईने फल हो । आमिलो बर्गको फलफुलमा पर्ने यो फल पौष्टिकताको दृष्टिले अति महत्वपुर्ण मानिन्छ। अचार, तरकारी दाल सर्वत् लगायत अन्य थप्रै परिकारको गहनाको रूपमा परिचित यो फलले स्वास्थ्य को दृष्टि ले विशेष महत्व राख्दछ। कागती भिटामिन &lsquo;सी&rsquo; को उपुक्त र सर्वसुलभ श्रोत हो।...
यी रोगीहरुबाट बचाउँछ गोलभेडाले, कस्ता छन् फाइदा ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th June 2020
काठमाडौं&ndash; हाम्रो गाउँघरमा सजिलै पाइने गोलभेडा निकै उपयोगी छ । खासमा तरकारीमा स्वाद ल्याउन प्रयोग गरिने गोलभेडा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ । गोलभेडामा प्रशस्त भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइने हुनाले यसको सेवनले हाम्रो शरिरलाई धेरै नै फाइदा गर्छ । यसमा भिटामिन ए, भिटामिन सि, भिटामिन के, बी१, बी३, बी५, बी६,...
महिनावारीको समयमा यी कुरा बिर्सेर पनि नखानुस्
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd June 2020
काठमाडौ &ndash; महिनावारीको समय महिलाहरुलाई अनेक थरीका शारीरिक र मानसिक समस्याबाट गुज्रनुपर्छ । मांसपेशिमा तनाव, दुखाई, चक्कर आउनु, हातखुट्टा बाउडिनु र गहु्रगोंपन आदी सामान्य समस्या हुन् । महिनावारीको समय महिला पिच्छे सबैको फरक फरक स्थिती हुन्छ । कसैलाई धेरै दुख्ने हुन्छ भने कसैलाई कम दुख्ने हुन्छ । महिनावारीको दुखाई र...
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको नतिजा प्रकाशित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd June 2020
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको नतिजा प्रकाशित भएको छ । गत फागुन २७, २८, २९, ३० र चैतको १ गते लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको हो । ३७८ जना सहभागी रहेको लिखित परीक्षामा ६५ जनाले नाम निकालेका छन् । हेर्नुहोस् सूची&nbsp; https://drive.google.com/file/d/1aOHbgvDgMfub9wnYw3lpR-VpNjj4UnEE/view ...
कस्ता महिला बढी सेक्सी हुन्छन् ?
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th June 2020
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 24th April 2020
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धकोे लडाईंमा सिंगो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका दैनिकी प्रभावित भएको छ । कारोबारहरु बन्द छन् । एक महिनादेखि कुनै जमघट र भेला गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । इतिहासकै अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका...
काठमाडौं उपत्यकामा तालाबन्दीको 7th औं दिन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th March 2020
काठमाडौं उपत्यका लक-डाउनको छैटौं दिन
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 29th March 2020
कोरोनाभाइरस (COVID-19) को प्रकोप रोक्नको लागि आइतवार सरकारले लागू गरिएको तालाबन्दीको छैटौं दिनमा प्रवेश गर्यो। कतारको माध्यमबाट फ्रान्सबाट फर्केका १-वर्षीय विद्यार्थीमा देशले दोस्रो COVID-१ reported घटना रिपोर्ट गरेको एक दिन पछि सरकारले मंगलबार बिहान at बजेदेखि राष्ट्रव्यापी तालाबन्दी लगाएको हो। पहिलो केस जनवरीमा रिपोर्ट गरिएको थियो तर पछि यसलाई रिकभरी घोषित...
एक १9 वर्षीया केटीले टेको अस्पतालमा COVID-19 पॉजिटिभको परीक्षण गर्‍यो
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd March 2020
काठमाडौं, फागुन २:: हालसालै फ्रान्सबाट नेपाल फर्केका एक नेपाली विद्यार्थीले कोरोनाभाइरसका लागि सकारात्मक परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने कि १-वर्षीया केटीले कोभिड १ positive लाई सकारात्मक देखाइएको छ। उनी मार्च १ 17 मा कतार हुँदै फ्रान्सबाट नेपाल जाँदै थिइन। घरमा एक्लै...